Izinsiza Zokukhiqiza | IZigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Umugqa Ohola Imishini Yokukhiqiza Izinsimbi
Umshini Wokugaya we-Agathon
Five-eksisi CNC Machining Centre
Umshini kaPeter Wolters CNC Precision Double End Lapping Machine
Futha Granulation Tower
Lo mshini ulungele i-centrifugal granulation yamakhemikhali, imikhiqizo yamakhemikhali nezinye izinto. Ifaneleka ikakhulukazi izinto zokwakha ezinezinhlayiya ezikhethekile ezinjenge-cemented carbide tungsten carbide powder, izinto zobumba ze-elekthronikhi, i-alumina, i-iron oxide, i-tungsten carbide, njll. isondo le-granulating atomizer, umumo oyindilinga Ukufudumala komkhiqizo kuhle, futhi ubukhulu bomkhiqizo ocindezelweyo buphezulu. Uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe bendabuko besigayo se-granulation technology, i-spray granulated powder inokuthungwa okufana kakhulu, futhi i-carbide ekhiqiziwe enekhwalithi ingcono.
Isithando Sintering Sokucindezela Okuphansi
Isithando somlilo sokucindezela okuphansi siyahambisana nemisebenzi eminingi enjengokukhishwa kwamanzi emzimbeni, ukugcwala komshini wokuhlanza, ukucindezela okuphansi kwengcindezi, ukucutshungulwa kwengcindezi ephansi, kanye nomoya womkhathi. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukucindezelwa okuphansi kwengcindezi yemikhiqizo ecindezelweyo, ukucindezelwa okuphansi kwengcindezi yemikhiqizo esetshenzisiwe kanye nokuhlungwa kokulungiswa kwekhabhoni kwemikhiqizo ecindezelwe. Umsebenzi oyinhloko wokuncishiswa kwengcindezi ephansi ukunciphisa ama-pores amancane ku-carbide enosimende. Ama-pores asemzimbeni osikiwe asusiwe ngesikhathi sesigaba sintering. Isigaba sokucindezela ikakhulukazi ukuqeda ama-pores amancane.
Umshini sintering esithandweni
Ukushisa ngaphansi kwezimo zokuhlanza, ukususa i-vacuum deinting kanye ne-sintering kusiza ekususeni ukungcola, kuthuthukise ubumsulwa bomoya wokumanzana, kuthuthukise ukumanzana kwesigaba se-binder, futhi kukhuthaze ukusabela. Phakathi nayo yonke inqubo yokuhlwaya, umzimba ominyene awuminyene cishe cishe yi-porosity, futhi kwenziwa uchungechunge lwemiphumela ebonakalayo kanye namakhemikhali nokulungiswa kwesakhiwo, futhi ekugcineni kube nekhabethe eliminyene elihlanganisiwe elinamakhemikhali athile, izakhiwo zomzimba nezomshini, futhi
Ithuluzi lokulinganisa isithombe seThuluzi
Lapho kukalwa, ithuluzi lokulinganisa ithuluzi lesithombe liqondanisa futhi lilinganise ithuluzi kusuka ezinkomba ezimbili. Ingakwazi ukubona ukulinganisa kwe-X-axis, i-Y-axis, i-Z-axis, i-axis ejikelezayo ye-lens axis, kanye nethuluzi lokujikeleza kokunye ukucindezela, okugwema ama-axis amaningi. Ngephutha elenziwe ngesikhathi sokucindezelwa kwesibili, i-coaxial high-precision rotating fixture isetshenziswa ku-lens ezimbili, okusiza kakhulu ukulinganisa. Ububanzi, ubude, ukusika onqenqemeni isikhala, i-rake angle, i-engeli yangemuva, ne-helix angle yethuluzi kungaqedwa kukodwa ukucindezela. Ukulinganisa okunembile kobukhulu obuhlukahlukene njenge-engeli eyinhloko yokwehla ne-engeli yokuphambuka yesibili